Askarigii dilay taliyihii NISA ee gobolka Sh/dhexe oo maanta dil toogasho ah lagu fulliyay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Askarigii dilay taliyihii NISA ee gobolka Sh/dhexe oo maanta dil toogasho ah lagu fulliyay
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku fullisay nin lagu soo eedeeyay dilka taliyihii ciidanka NISA ee gobolka Sh/dhexe C/weli Ibraahim Maxamed.
Dilka toogashada ah ee saakay ka dhacay fagaaraha Iskool Bolisiyo ee magaalada Muqdisho ayaa lagu fulliyay eedeysanaha lagu magacaabi jiray Yuusuf Xuseen Maxamuud.
Eedeysanahaasi ayaa la sheegayaa inuu ka mid ahaa illaalada taliyahii NISA ee gobolka Sh/dhexe, waxaana lasoo qabtay xilli uu isku dayay inuu baxsado, kadib markii uu falka dilka ah geystay.
Sidoo kale, ninkaasi ayaa lagu eedeeyay inuu xiriir dhaw la lahaa Xarakada Al-shabaab, waxaana xukunka dilka ah ee maanta lagu fulliyay goobjoog ka ahaa saraakiisha ugu sareeysa ee maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Tan iyo markii taladda dalka qabtay madaxweyne Farmaajo waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida si xowli ah u bilawday fullinta dilalka toogashada ah ee hore loogu xukumay dambiilayaasha dilka hore u geystay.